Sakafo ampiana sakafo, asidra sorbika, voankazo moanina - Tianjia
Cosmetika sy zavatra simika
AMIN'NY TANORA amin'ny QUALITY SY mampitombo ny hahazoana hevi-javatra ny MATCHA TEA
Aspartame mamy mahery
Proteinina soja mitokana tsy GMO
Fitsimbinana ny fahadiovana avo lenta BP Grade Sodium Benzo ...
Powder asidra ascorbika avo lenta
Ny fivarotana sakafo tsara indrindra, Additives Citric Acid Anhydrous
Shanghai Tianjia Biochemical Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2011 ary miorina ao Shanghai, Sina.
Isika manokana dia manampahaizana manokana amin'ny sehatry ny Sakafo, Sakafo & Fametahana Sakafo.
Nandritra ny 10 taona mahery nivoatra sy nianatra tao amin'ny indostria, nanangana fiaraha-miasa maharitra izahay miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay any Shina sy any ivelany.
Miaraka amin'ny fahitana ny kalitao voalohany, fitantanana ny fahamendrehana ary ny tombotsoan'ny fiaraha-mientana, nanohana ireo mpiara-miombon'antoka izahay sy ny mpanjifany namokatra vokatra sy tsena vaovao marobe, namorona fifandraisana matoky tena lehibe ho an'ny roa tonta. Manaraka akaiky ny politikan'ny "One Belt & One Road" izahay, manohy mampivoatra ny tsena sy vokatra vaovao, mandray anjara amin'ny ezaka manetriketrika ho an'ny indostrian'ny fanondranana any Shina.
Izahay dia manana ekipa matihanina sy za-draharaha izay mifantoka amin'ny marketing, loharanom-baovao, lojika, fiantohana ary serivisy aorian'ny varotra.
Fomba famokarana: ny asidra asborbic dia voavolavola syntetika na alaina avy amin'ny loharano legioma isan-karazany izay ahatongavany voajanahary, toy ny valahana raozy, blackcurrant, ny ranom-boankazo, ary ny voankazo masaka Capsicum annuum L. D -...
Voankazo moanina / Mogrosides-Ny lamaody mamy voajanahary dia miakatra
Amin'izao fotoana izao, ny "siramamy ambany" dia fironana mafana amin'ny indostrian'ny sakafo, ary ny fihenan'ny siramamy dia fironana mitombo. Drafitra Product marobe no manandrana mampihena ny siramamy ampiana. Eo ambanin'io fironana io, ny zava-mamy voajanahary voajanahary inulin, glycosides steviol, ary mogroside dia soloin'ny siramamy ...
Ny fampiharana ny Tianjia Brand Aspartame Aspartame dia ampiasaina amin'ny famokarana vokatra tsy misy siramamy, ambany kaloria ary sakafo betsaka, toy ny: ● Fisotroana: zava-pisotro misy alikaola sy gazy, ranom-boankazo ary syrup sy voankazo. ● Ambony ambony latabatra: mamy mamy, mamy vovoka (sotro-for-sotro), mamy ...
Mifandraisa amin'ireo olon-tianao MATCHA hafa
Mitroka voankazo moanina, Vitamina C Ascorbic Acid Powder, Aspartame, Vovoka asidra ascorbika madio, Ascorbic Acid Powder Bulk, Voaroaka ny proteinina soja,